भारतीय प्रहरीसँग साँठगाँठ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका ३ भारतीय नागरिकलाई नेपाल सरकार तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी समेत नगराई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको आरोप एआईजी हरिबहादुर पालमाथि लागेको छ ।
कात्तिक ५ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा पक्राउ परेका मोहम्मद नुर, मोद रसाद र यासिर अराफातलाई गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत जानकारी नदिई पालकै निर्देशनमा गुपचुप रूपमा भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
माथिल्लो निकायमा जानकारी समेत नदिई कुनै प्रहरी अधिकारीले गुपचुप रूपमा भारतीय प्रहरीसँग साँठगाँठ गर्नु गम्भीर विषय हो ।
यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन समेत गरे पनि दोषीमाथि कारवाही भएको छैन ।
शक्तिकेन्द्र (विशेष गरी बालुवाटार)सँग नजिक रहेका पाललाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय हिच्किचाइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभए जस्तो गरेको छ । गृह प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए ।
‘यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा केही जानकारी छैन,’ गृह प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘फेरि पनि भनें, अहिलेसम्म केही जानकारी आएको छैन ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरी प्रतिवेदन गृहमा पठाइसकेको छ ।
‘त्यो विषय बाहिरिएपछि छानबिन समितिले प्रतिवेदन गृहमा बुझाइसकेको छ,’ उनले भने ।
स्रोतका अनुसार त्यो प्रतिवेदनमा विमानस्थलबाट ३ जना भारतीय नागरिकलाई लिएर जाने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीएसपी नमराज भट्टराईले एआईजी पालको निर्देशनमा आफूले उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताएको उल्लेख छ ।
आफ्नै ब्याची त्यसमा पनि शक्ति केन्द्रनजिक भएकाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री पनि यस विषयमा बोल्न चाहँदैनन् ।
‘यो विषयमा मेरो प्रवक्ताले बोल्नुहुन्छ । मैले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको छु,’ आईजीपी क्षेत्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘के चाहिन्छ उहाँलाई फोन गर्नुस्, म सहयोग गर्न भन्छु,’ भन्दै आईजीपी पन्छिए ।
प्रहरीका नवनियुक्त प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मुकुन्द आचार्यले पनि यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए ।
‘म भर्खर आएको हुँ । पुरानो कुरा रहेछ, मलाई थाहा छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भने ।
पहिलाका प्रवक्ताले बुझबुझारथ गरेर जानुभएको होला नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो बारेमा जानकारी नभएको बताए ।
यद्यपि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी प्रवक्ता परिवर्तन हुँदा कार्यालयका काम कारवाही बुझबुझारथ गरेर जाने चलन छ ।
केस के हो ?
गत कात्तिक ५ गते भारतीय प्रहरीको सुुराकीका आधारमा महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीएसपी नमराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मोहम्मद नुर, मोद रसाद र यासिर अराफातलाई पक्राउ गरेको थियो ।
भारतमा आतंकवादी गतिविधि संलग्न रहेको अभियोगमा भारतीय प्रहरीको खोजीमा रहेका उनीहरू यूएईको सारजहा विमानस्थल हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
उनीहरूलाई डीएसपी भट्टराईको टोलीले स्कोर्पियोमा राखेर भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
भारतको चण्डीगढ घर भएका नुर र जम्मु–कश्मीर घर भएका रसिद तथा अराफातले काठमाडौंमा अग्रिम होटल बूकिङ गरी सम्पर्क व्यक्ति खुलाएर आएका थिए ।
नेपालमा पक्राउ परेका भारतीय अपराधीलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाउने हो भने पनि गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कुनै प्रहरी अधिकारीले अवैधरूपमा विदेशी प्रहरीसँग साँठगाँठ गरेको खुल्दा पनि उक्त प्रहरी अधिकारीलाई कारवाही नहुनु गम्भीर विषय भएको सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीले जिम्मा लगाएका तीनै जनाको भारतीय प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको छ ।
अनेकौं रोगको औषधि हो अमला, यस्ता छन् फाइदा